Bit By Bit - Ethics - 6.6.4 tichisarudza mukutarisana chokwadi
Kusava nechokwadi haafaniri kutungamirira kungopeta maoko.
Nzvimbo yechina uye yekupedzisira kwandinotarisira kuti vanotsvakurudza vashandise kugadzirira kuita zvisarudzo pasinei nekusava nechokwadi. Izvi zvinoreva, mushure mokunge mafirosofi uye kuenzanisa, maitiro ekutsvakurudza anosanganisira kuita zvisarudzo pamusoro pezvinofanira kuita uye izvo zvisiri kuita. Zvinosuruvarisa, izvi zvisarudzo zvinowanzofanira kuitwa zvichienderana nemashoko asina kukwana. Semuenzaniso, pakuronga vamwe, vatsvakurudzi vangangodaro vaida kuziva kuti zvingaita kuti mumwe munhu ashanwe nemapurisa. Kana, pakuronga Kupesana Kwepfungwa, vatsvakurudzi vangangodaro vaida kuziva kuti zvinogona kuita kuti vanyori vaone kuora mwoyo. Izvi zvingave zvichida zvakanyanya kwazvo, asi zvakanga zvisati zvambozivikanwa mberi kwekutsvakurudza kunoitika. Uye, nokuti hazvirevi zvakajeka ruzivo rwevanhu pamusoro pezviitiko zvakashata, izvi zvinotarisirwa zvisati zvazivikanwa.
Kusanzwisisika hakusi kwekutsvakurudza kwevanhu munharaunda ye digital. Apo Bhuku reBelmont rakarondedzera kuongorora kwakarongeka kwezvipingamupinyi uye kubatsirwe, zvakanyatsobvuma kuti izvi zvingava zvakaoma kuenzana chaizvo. Izvi zvisingazivikanwi, zvisinei, zvakanyanya kukura muzera re digital, muchidimbu nokuti tine ruzivo rwakawanda nehutsva urwu rwekutsvakurudza uye mune chikamu nekuda kwezvakadzama zvekutsvakurudza pachako.
Zvichipa izvi kusava nechokwadi, vamwe vanhu vanoita sevanotsigira chimwe chinhu chine "zviri nani zvakachengeteka kudarika kusuruvara," iyo inoshandiswa pakugadzirisa kweChinyorwa cheChitatu . Kunyange zvazvo nzira iyi inonzwisisika-zvichida kunyange yakachenjera-inogona kukonzera kukuvadza; zvinotyisa kutsvakurudza; uye inokonzera vanhu kutora maonero akawandisa emamiriro ezvinhu (Sunstein 2005) . Kuti tinyatsonzwisisa matambudziko neChishopiso chekutanga, ngatitarisei Kutapukisa kweEmotional. Kuedza kwakarongwa kunosanganisira vanenge 700 000 vanhu, uye pane chokwadi chaiva nemukana wekuti vanhu vari kuedza vaizotambura. Asi pane zvakarewo mukana wekuti kuedza kunogona kuburitsa ruzivo rwaizobatsira kune vashandisi vepa Facebook uye kuvanhu. Nokudaro, nekubvumira kuedza kwaive kungozi (sezvazvakanyatsokurukurwa), kudzivirira kuedza kwaizove kwakave pangozi, nokuti ingadai yakabudisa zivo inokosha. Zvechokwadi, sarudzo yakanga isiri pakati pekuita kuedza sezvakaitika uye kusaita kuedza; paiva nehuwandu hwekugadziriswa kwekugadzirwa kwaizove kwakakonzera kuhutano hwakasiyana. Zvisinei, pane imwe nguva, vatsvakurudzi vachave nekusarudza pakati pekudzidza nekusaita, uye pane zvipikiso mune zvose zviri kuitwa nekusaita. Hazvina kufanira kuisa pfungwa pazvikanganiso zvekuita. Zviri nyore, hakuna ngozi-isina kuswedera.
Kufambira mberi kweChinyorwa cheChishopiso, imwe nzira inokosha yekufunga pamusoro pekuita zvisarudzo zvakapiwa kusava nechokwadi ndeyomutengo wakawanda wengozi . Izvi zvinoedza kuratidzira ngozi yeimwe chidzidzo pamusoro pezvipingamupinyi izvo vatori vechikamu vanoita muupenyu hwavo hwezuva nezuva, sekutamba mitambo uye kutyaira motokari (Wendler et al. 2005) . Iyi nzira inokosha nokuti kuongorora kana chimwe chinhu chinosangana nehuwandu hwehuwandu hwehuwandu huri nyore pane kuongororwa chaiyo yehutengo. Semuenzaniso, muKupikisa Kwemwoyo, usati watanga kudzidza, vatsvakurudzi vangave vakafananidza zvinyorwa zvemashoko zveNews Feeds mukuedza kweimwe yeMashoko Feeds pa Facebook. Kudai vaive vakafanana, saka vatsvakurudzi vangave vakagumisa kuti kuedza kwakasangana nehuwandu hwehuwandu hwehutengo (MN Meyer 2015) . Uye ivo vaigona kuita chisarudzo kunyange dai vakanga vasingazivi nheyo yakakwana yematambudziko . Nzira imwecheteyo ingadai yakashandiswa kune Encore. Pakutanga, Encore yakakonzera kukumbira mawebhusayithi akazivikanwe kuva nehanya, akadai seaya akarambidzwa masangano ezvematongerwe enyika munyika dzine hurumende dzinodzvinyirira. Sezvo zvakadaro, yakanga isiri pangozi yevatori vechikamu mune dzimwe nyika. Zvisinei, iyo yakavandudzwa shanduro yeEncore-iyo chete inokonzera kukumbira ku Twitter, Facebook, neYouTube-yakanga isina ngozi nokuti zvikumbiro zvemasayiti izvi zvinokonzerwa panguva yakawanda web browser (Narayanan and Zevenbergen 2015) .
Chimwe chipiri chinokosha pakuita zvisarudzo pamusoro pezvidzidzo nechinetso chisingazivikanwi kuongorora simba , izvo zvinobvumira vatsvakurudzi kuverenga senzaniso zvakakura ivo vachada kuongorora zvakajeka kuitika kwehupi hwakapiwa (Cohen 1988) . Kana chidzidzo chako chichiratidza kuti vatori vechikamu vanoisa pangozi-kunyange pangozi yakawanda-ipapo mutemo weBunficence unoratidza kuti iwe unofanirwa kuisa chikamu chiduku chiduku chinodiwa pakuzadzisa zvinangwa zvako. (Funga zvakare kumudziro wekutanga muchitsauko 4.) Kunyange zvazvo vamwe vatsvakurudzi vane chinangwa chekuita zvidzidzo zvavo zvakakura sezvinobvira, maitiro ekutsvakurudza anoratidza kuti vatsvakurudzi vanofanira kuita zvidzidzo zvavo zviduku sezvingaita. Simba kuongorora hakusi itsva, hongu, asi kune kusiyana kwakakosha pakati penzira iyo yaishandiswa muzera rekare uye kuti inofanira kushandiswa sei nhasi. Mumakore ekufananidzira, vatsvakurudzi kazhinji vakashandisa kuongorora simba kuti vaone kuti kudzidza kwavo kwakanga kusinganyanyi kuduku (kureva, pasi pesimba). Zvino, zvisinei, vatsvakurudzi vanofanira kuongorora simba kuti vaone kuti kudzidza kwavo hakusi kukuru (kureva, kuwedzerwa-simba).
Iyo yakawanda inowanzoisa pangozi uye kuongorora simba kunobatsira iwe kufunga nezvekugadzira zvidzidzo, asi hazvikupei ruzivo rutsva pamusoro pekuti vatori vechikamu vanogona kunzwa sei pamusoro pekudzidza kwako uye zvipi zvingakanganisa zvavanogona kubva pakuita nayo. Imwe nzira yekugadzirisa kusava nechokwadi ndeyokuunganidza mamwe mashoko, izvo zvinotungamirira kumagariro-kupindura mhinduro uye miedzo yakagadzirwa.
In chemufungo-Achipindura kuongorora, vaongorori kupa tsananguro pfupi mumwe aronga pakutsvakurudza chirongwa wozobvunza mibvunzo miviri:
(Q1) "Kana munhu iwe nehanya zvaiva mukwikwidzi mutori nokuda kuedza ichi, waizoda kuti munhu anofanira yaisanganisira sezvo ubatanidzwe?": [Hongu], [handina zvatinofarira], [Kwete]
(Q2) "Unotenda kuti vaongorori vanofanira kubvumirwa mberi kuedza ichi?": [Hongu], [Hongu, asi nokungwarira], [Handina chokwadi], [Kwete]
Kuteerera mubvunzo mumwe nomumwe, vapindura vanopiwa nzvimbo iyo vanogona kutsanangura mhinduro yavo. Pakupedzisira, vapindura-vanogona kunge vari vatori vechikamu kana vanhu vanyoreswa kubva kumisika yebasa rekushanda (semuenzaniso, Amazon Mechanical Turk) -kushandisa mibvunzo yepamusoro yevanhu (Schechter and Bravo-Lillo 2014) .
Maitiro-mhinduro dzinoongorora ane zvinhu zvitatu zvandinoona zvakanyanya kunaka. Chokutanga, zvinoitika zvisati zvaitwa, uye saka vanogona kudzivirira matambudziko vasati vatsvakurudza (zvisingaenzaniswi nemaitiro anocherechedza kugadzirisa kusagadzikana). Chechipiri, avo vanopindura mukutsvaga kwehutano-mhinduro ndeye vasiri vatsvakurudzi, uye naizvozvo izvi zvinobatsira vanotsvakurudza kuona zvidzidzo zvavo kubva kuvanhu. Pakupedzisira, maitiro ehutano-mhinduro dzinoita kuti vatsvakurudzi vape mavhesi ezvinyorwa zvekutsvakurudza kuitira kuti vaongorore maonero ehutano hwemhando dzakasiyana dzeprojekti imwechete. Chimwe chidimbu, zvisinei, chemitemo-inobvunzurudzwa ndeyekuti hazvisi pachena kuti kusarudza sei pakati pekutsvakurudza kwakasiyana-siyana kwakapiwa tsvakurudzo. Asi, pasinei nemiganhu iyi, maitiro-maitiro ekuongororwa anoita seanobatsira; kunyangwe, Schechter and Bravo-Lillo (2014) vanorondedzera kurasa chidzidzo chakagadzirirwa mukupindura zvinetso zvakasimudzwa nevatori vechikamu mune imwe tsvakurudzo yekuongorora.
Kunyange zvazvo kuongorora-maitiro ekuongororwa kunogona kubatsira pakucherechedza kugadziriswa kune kutsvakurudzwa kunotsvakurudzwa, havagone kuenzanisa kuvepo kana kuoma kwezviitiko zvinotambudza. Imwe nzira iyo vatsvakurudzi vezvokurapa vanogadzirisa kusava nechokwadi mune zviitiko zvakanyanya kuisa mungozi ndeyokuita miedzo yakagadzirirwa -kuswedera kunogona kubatsira mune dzimwe tsvakurudzo dzevanhu. Paanoedza kubudirira kwechirwere chitsva, vatsvakurudzi havangomhanyiri kune rimwe guru rinotarisirwa kuchipatara. Pane kudaro, vanomhanya maitiro maviri ezvidzidzo kutanga. Pakutanga, muchikamu chekutanga, vatsvakurudzi vanonyanya kufunga nezvekuwana chirongwa chakachengeteka, uye zvidzidzo izvi zvinosanganisira nhamba shomanana yevanhu. Kana imwe nguva chirwere chakachengeteka chave chagadziriswa, chikamu chechipiri II chinongedza kushanda kwechirwere; ndiko kuti, kukwanisa kwayo kushanda mumamiriro ezvinhu akanaka-mamiriro (Singal, Higgins, and Waljee 2014) . Chete mushure mekudzidza kwechikamu chekutanga uye chepiri ndakapedzerwa mishonga mitsva yakabvumirwa kuongororwa mumutambo mukuru unongorongedzwa. Kunyange zvazvo zvakanyatsogadziriswa zviyero zvinoshandiswa mukugadzirwa kwezvinodhaka zvitsva zvingasava zvakanaka zvakakwana pakutsvakurudza kwevanhu, kana vakatarisana nekusava nechokwadi, vatsvakurudzi vangaita zvidzidzo zviduku zvakanyatsotaura nezvekuchengeteka uye kubudirira. Somuenzaniso, pamwe neEncore, unogona kufungidzira vatsvakurudzi vanotanga nevatori vechikamu munyika dzine simba rekutonga mutemo.
Pamwe chete, aya mazano mana-iyo yakawanda inowanzoisa pangozi, kuongorora simba, maitiro-maitiro ekuongorora, uye miedzo-inogona kukubatsira kuti uende mberi nenzira inonzwisisika, kunyange mukutarisana nekusaziva. Kusatenda hazvifaniri kutungamirira kusina kuita.